संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत « Naya Page
प्रकाशित मिति : 29 June, 2020 3:15 pm
काठमाडौं, १५ असार । राष्ट्रियसभा बैठकले ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक, २०७५ माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उपर विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
सभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट उक्त प्रस्ताव कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
बैठकले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको ‘नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उपर विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।